FIKAMBANAN’NY MPIKABARY MALAGASY: Mivelatra any ampitan-dranomasina - Journal Madagascar
Mankalaza ny faha-55 taona nijoroan’ny ny FIMPIMA (Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy). Efa nanomboka ny volana novambra ny fankalazana ary hofaranana ny 28 jona 2019, ho avy izao. Hizara roa ny famaranana ny fankalazana ny faha-55 taonan’ny FIMPIMA. Ny tapak’andro marainan’ny 28 jona 2019 dia hisy ny velan-kevitra ataon’ireo mpikabary avy ao amin’ny fikambanana. Hanao fampisehoana kabary ihany koa ireo nahazo ny laharana voalohany isam-paritany, tamin’ny fifaninanana kabary, mitondra lohahevitra hoe: tokantrano mahatanteraka ny zon’olombelona, loharanom-pahasambarana. Eny amin’ny akademia Malagasy Tsimbazaza no hanaovana izany. Ny « alin’ny mpikabary » kosa no hamaranana tanteraka ny fetim-pankalazana. Ny alin’ny 28 jona 2019 no hanatanterahana izany. Seho kanto, filatroana, totorebika, hanimpitoloha fisarihana ireo loka maro, toy billet d’avion Tana-Paris-Tana, Tana Dubaï-Tana avy amin’ireo mpiara-miasa amin’ny FIMPIMA no hitranga amin’io fotoana io, hoy ny filoha Andriamboavonjy Hanitra.
Tsy eto Madagasikara ihany no ahitàna mpikabary fa efa misy ihany koa any ivelany. Raha ho an’ny FIMPIMA dia firenena valo any ampitan-dranomasina no misy ratsa-mangaika, raha ny fanazavan-dRamatoa Filoha. Rafitra ambony indrindra ny fikambanana ny zaika, manaraka azy ny birao foibe, ny Antenimiera, ny faritany, ny sampana ary ny rantsana. Manana toeram-pampianarana kabary 170, manerana an’i Madagasikara ny fikambanana amin’izao fotoana izao. Mampatsiahy ny filoha mpanampy, Jean Jacques fa mandala ny kolontsaina malagasy amin’ny alalan’ny kabary ny FIMPIMA.
Tags: Andriamboavonjy HanitraFIMPIMA
FMF : Les dates relatives aux élections du Président et des membres du comité exécutif